Global Voices teny Malagasy » Tsingerintaonan’ny Rivopanovàna Silamo sy Ireo Iraniana Bilaogera · Global Voices teny Malagasy » Print
Tsingerintaonan'ny Rivopanovàna Silamo sy Ireo Iraniana Bilaogera
Voadika ny 29 Jolay 2017 9:00 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fivavahana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna, Zon'olombelona
Bilaogera maro no nanoratra mikasika ny fihetsehampony, ny zava-niainany sy ny heviny manokana mikasika ny Rivopanovàna Silamo , izay ankalazan'ny sasany ny faha-28 taonany ny 11 Febroary (2007) ary anenenan'ny sasany izany kosa. ‘Ndeha hijery sasantsasany amin'ireo lahatsoratra ireo.
Milaza i Mohmmad Ali Abtahi, lefitry ny filoha taloha sady pôlitisiana refôrmista, fa iray tamin'ireo zava-nitranga lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona ny Rivopanovàna Silamo [Fa] ”izay nanoloan'ny voninkazo ny bala.” Manampy izy fa ny firaisan'ny vahoaka dia mahatonga ity rivopanovàna ity ho tanteraka. Milaza i Abtahi fa tsy afaka ny hampihena ny lanjan'ny rivopanovàna ny eritreri-dratsin'ny vahoaka momba ny manampahefana amin'izao fotoana izao.
Mamaky fomba fijery hafa mikasika ilay rivopanovàna  isika ao amin'ny ViewfromIran. Milaza ilay bilaogera:
Faly tamin'ilay rivopanovàna aho. Ankehitriny, toa ireo mpiray tanindrazana amiko an-tapitrisany aho, izay, toa ahy, amin'ny maha tanora lahy sy vavy, dia nidina an-dalambe mba hankahery ilay rivopanovàna sy hanebaka ampahibemaso an'i Amerika, ary izay mahatsiaro voafitaka sy ravarava amin'izao fotoana izao. Handray anatra avy amiko ve ireo vahoaka tanora miantsoantso toy izany amin'izao andro izao? Ho toa ahy ve izy ireo? Feno nenina? Tsy manan-kialofana?
Manazava ny antony nitrangan'ilay rivopanovàna [Fa] i Omid66. Manoratra izy:
Ny fijerena sarimihetsika Latino mitondra rivopanovàna no nahalasa be fihetsehampo ny firenena iray, lasa maty an-kanina ary nihevitra fa afaka hahazo rano sy herinaratra maimaimpoana…rehefa manohana ny mpitondra fivavahana ary mandoro banky sy toeram-bahoaka ireo avarapianarana ao amin'ny firenena iray…dia azontsika ny antony nahatonga ilay rivopanovàna.
Milaza i FM Sokhan, mpanoratra sy bilaogera, fa 28 taona taorian'ny rivopanovàna, isika mpanoratra dia tokony miafina sy mampiasa solonanarana  mba hilazàna ny marina [Fa]. Manampy ilay bilaogera fa ny peniny no fitaovampiadiany ary ho solon'ny baomba, dia manana ny teny ry zareo.
Manoratra i Maryam Shabani fa voalaza ho famelomana indray ny ”tena soatoavina Silamo” ilay rivopanovàna kanefa taorian'ny taona mifanesy dia hita fa voalevina ambanin'ny vesatry ny fihatsarambelatsihy sy ny finoanoampoana ny soatoavina Silamo [Fa]. Manampy izy: ”Voalaza fa natao hanomezam-boninahitra ny vahoaka Iraniana ilay rivopanovàna saingy mihamaro ny vahoaka mijaly mafy noho ny olana ara-toekarena sy ny fahantrana.”
Izay ary no amin'ity herinandro ity ka amin'ny andiany manaraka izay tsy ho ela indray mihaona.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/07/29/104327/
 Rivopanovàna Silamo: http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_Revolution
 iray tamin'ireo zava-nitranga lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona ny Rivopanovàna Silamo: http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146308535
 fomba fijery hafa mikasika ilay rivopanovàna: http://viewfromiran.blogspot.com/2007/02/down-with-down-withs.html#links
 ny antony nitrangan'ilay rivopanovàna: http://www.omid66.blogfa.com/author-omid66.aspx
 isika mpanoratra dia tokony miafina sy mampiasa solonanarana: http://news.gooya.eu/politics/archives/2007/02/057068.php
 famelomana indray ny ”tena soatoavina Silamo” ilay rivopanovàna kanefa taorian'ny taona mifanesy dia hita fa voalevina ambanin'ny vesatry ny fihatsarambelatsihy sy ny finoanoampoana ny soatoavina Silamo : http://www.maryamshab.blogfa.com/post-161.aspx